Holmes များအတွက်အရေးပေါ်သတင်းအချက်အလက် | Holmbygden.se
Holmes များအတွက်အရေးပေါ်ပြန်ကြားရေးညာဘက်အစဉ်အမြဲနေတဆင့်အလွယ်တကူတွေ့နိုင်ပါသည် holmbygden.se/akut eller via den vitgröna första hjälpen-symbolen upp till höger på ရှေ့.
Holmes ရဲ့နှလုံးအကူစက် / Olle Frisk tel. 0730-484 511 သို့မဟုတ်
အဖြစ် 30 St “Förstärkta Medmänniskor” utspridda i Holm. Ett projekt där SOS Alarm larmar frivilliga Holmbor vid en olycka via SMS och kan vara på plats inom några minuter eller i bästa fall sekunder, beroende på avstånd. ပိုပြီးထပ်မံချ Read.
En ambulans stationerad i Liden med ca 20 ငါ့ကို (17 ကီလိုမီတာ) till Holms Kyrka efter larm (anspänningstid* 90 sek) när den är tillgänglig lokalt. Lidenambulansen har dock emellanåt uppdrag på andra orter och långkörningar till t.ex. Umeå. I sådant fall larmas ambulans från Sundsvall.
En deltidsbrandkår i Liden med ca 23 ငါ့ကို (17 ကီလိုမီတာ) till Holms Kyrka efter larm (anspänningstid*5ငါ့ကို). De larmas även på s.k. “IVPA-larm”, i väntan på ambulans – en förstärkning i väntan på att ambulans skall anlända. T.ex. vid hjärtstopp.
Ambulansstation i Sundsvall, med ca 50 ကီလိုမီတာ (30 ငါ့ကို) till Holms Kyrka (90 sek at.*).
Heltidbrandkårer i Sundsvall och Timrå med cirka 35 ငါ့ကို (50 ကီလိုမီတာ) till Holms kyrka från larm (90 sek at.*).
Projektet “တိုးမြှင့်အိမ်နီးချင်း” i Holm är i drift sedan jaunari 2014
– အမှတ်တံဆိပ် (Så här gör du vid en husbrand.)
– Drunkning (Lär dig om vattenlivräddning, se om någon håller på drunkna, islivräddning နှင့် issäkerhet.)
– traffic မတော်တဆမှု (Läs hur du gör först på en trafikolycka, lyssna သို့မဟုတ် se film.)
(တစ်ဦးကအတည်ပြုခြင်းသင့်ရဲ့ e-mail, ထံသို့စလှေတျပါလိမ့်မည်။)
အောက်က image ကိုဇာတ်ကောင် Enter:*
15/2 2019 SVT အစီရင်ခံစာ & Västernorrland: Planer på att utöka samarbetet med frivilliga i glesbygd:
SVT intervjuade Olle Frisk och Niklas Wikholm i Holm som ställer upp frivilligt och hjälper andra bybor vid olyckor. Nu finns planer på att samarbetet skall utökas utanför Medelpad. ဒီမှာပို Read.
Reportage från Holm i SVT Rapport och Västernorrland den 15 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2019.
စေတနာ့ဝန်ထမ်းမတော်တဆမှု၏မြင်ကွင်းတစ်ခုမှာကယ်ဆယ်ရေးနှင့်လူနာတင်ယာဉ်မှအရေးပါသောအဖြည့်နိုင်ပါတယ်. Linköping University မှအသစ်သုတေသန. Läs SVT’s artikel.
အဆိုပါစီမံကိန်း Holmes တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းမီဒီယာနှင့်အရေးပေါ်န်ဆောင်မှုများ မှလွဲ. လိုက်နာမှု၌ရှိ၏, Linköpingတက္ကသိုလ်မှသုတေသီများအားဖြင့်. ဤတွင်မတော်တဆမှု၏အမှု၌စီမံကိန်းအားကောင်းအိမ်နီးချင်းများနှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းကိုမီးမောင်းထိုးပြရာနှစ်ခုသုတေသနစာတမ်းများများမှာ:
2016 25/4: ကစားသမားများနှင့် ပတ်သက်. အချို့ကတာဝန်ယူမှုကိစ္စများ, အထူးသဖြင့်မိမိဆန္ဒအလျောက်, အရေးပေါ်အတွက်ပါဝင်.
လင့်ခ်ကနေတဆင့်သင်အစီရင်ခံစာများတစ်ဦးအကျဉ်းချုပ်ကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့် T.H. နိုင်ပါတယ်. တူညီသောစာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်လည်းအပြည့်အဝစာသားထဲမှာအစီရင်ခံစာကိုတွေ့လိမ့်မည်.
8/7 2015, SR P4 နေ့လည်: Fler bybor utbildas i att hjälpa till vid olyckor
– ၏ဇာတ်လမ်းအကြောင်းကိုလေ့လာပါ Holmbygden.se.
– ၏ဇာတ်လမ်းအကြောင်းကိုလေ့လာပါ Sveriges Radios här.
14/4 2014, SR P1 Vetenskapsradion ဖိုရမ်: နိုင်ငံသားများအထဲကကိုခေါ်ကြသောအခါ
အရင်းအမြစ်: TV4 Nyheterna Sundsvall; Frivilliga krafter livräddar i byarna 14/5 2014.
2015 13/7 Holmbygden.se: “တိုးမြှင့်အိမ်နီးချင်း” – အောင်မြင်စွာကျေးလက်ဒေသများတွင်
2014 13/4 ဆွီဒင်ရေဒီယို: Vetenskapsradion i Holm om ”Förstärkta medmänniskor”
2012 17/12 Sundsvall Tidning: ကျေးလက်ဒေသများရှိလျော့နည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
2012 16/12 Holmbygden.se: Holmes ရဲ့အသစ် "ဒေသခံအသက်ကယ်သမား"
2012 9/12 Holmbygden.se: Holmes အတွက်အသက်ကယ်သမားဖြစ်ချင်တယ်?
2012 22/5 Holmbygden.se: Holmes ရဲ့နှလုံးအကူစက် - ယခုဝန်ဆောင်မှုအတွက်!
2012 10/5 Holmbygden.se: Holmes ရဲ့အသစ်နှလုံးအကူစက်၏ဆန္ဒပြ 15/5!
En hjärtstartare finns lokalt och kan nås vid ett hjärtstopp – redan innan en ambulans kommit på plats. Läs nedan hur du gör vid ett hjärtstopp, ကိုယ့် Holmes.
လက်စွပ် 112 (be helst någon annan) နှင့်
တွင် ringer SOS tel. 112,
တွင် ringer Olle 0730-484 511 eller hämta hjärtstartaren.
အရင်းအမြစ် (plus lokala tillägg): HLR-rådet (hlr.nu).
သငျသညျရင်ဘတ်နာကျင်မှုရလိုလျှင်အမှုအရာအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်, မကြာခဏကြောင့်အန္တရာယ်ကင်းဖြစ်ပါသည်. သို့သော်တစ်ဦးခိုင်လျှင်, သွားဒါမှမဟုတ်သင်ရင်ဘတ်ဝေဒနာရှိပါကအသက်ရှုထဲကခံစားနေချိန်မှာပါဘူးသောရင်ဘတ်ထဲမှာဖိနှိပ်သို့မဟုတ် crampy နာကျင်မှု, အော်ကလီဆန်ခြင်း, စေးသို့မဟုတ်မမှန်နှလုံးခုန်. ထိုအခါသူတို့မခေါ်ပါလိမ့်မယ် 112. တစ်ဦးတည်းလူကိုလည်းအနီးအနားမှာတစ်စုံတစ်ဦးကိုခေါ်သင့်ပါတယ် Is, ထို့ကြောင့်လူနာတင်ယာဉ်ရောက်ရှိမတိုင်မီသူတို့တစ်ဦးတည်းမဟုတ်. အရေးကြီးသင်တစ်ဦး cardiac arrest နဲ့ get လျှင်. ဆက်ဖတ်ရန် – sjv.upplysningen 1177.se.
လူနာတင်ကားကိုစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ Treo သို့မဟုတ်အက်စပရင်ကိုယူနိုင်ပါသည်နေစဉ်.
ဆေးထဲမှာအက်စပရင် (ညွှန်း) platelets ကာကွယ်ပေးသည် (thrombocytes) အတူတူဖုတ်နှင့်ပုံစံကိုခဲ. အက်စပရင်ကိုနှလုံးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူနာများ၏အသက်ကိုကယ်ဖို့လူနာတင်ယာဉ်သို့မဟုတ်ရဟတ်ယာဉ်များအတွက်စောင့်ဆိုင်းနေစေခြင်းငှါ. အမြဲတမ်းသင်ယူနေကြတယ်ဆိုတာကိုမူးယစ်ဆေးဝါးသူနာပြုအကြောင်းကြား.
အရင်းအမြစ်: ကားလ် Johan Tötterman, နှလုံးအတွက်အထူးကု- ရောဂါများ.
သငျသညျ Nitro-ဆေးဝါးရှိသည် Do (မှုန်ရေမွှား / တက်ဘလက်) သငျသညျစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်အတွင်းသင်ကယူနိုင်ပါသည်, နှင့်ငြိမ်ဝပ်စွာနေ. Nitroglycerin (ညွှန်း) ထိုအသွေးကိုရောက်လာခွင့်ရေယာဉ်များ dilates. Nitro လျှာအောက်မှာပက်ဖြန်းခြင်းဖြင့်သူနာပြုအသုံးပြု.
ဆေးရုံကိုယ့်ကိုကိုယ်မောင်းမနေပါနဲ့. ကားမောင်းနေစဉ်သင်ထွက်လွန်သွားလျှင်ဒီအလှည့်များတွင်မတော်တဆမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်. လူနာတင်ယာဉ်မောင်းသို့မဟုတ်ဖုန်းခေါ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုမေး.
angina နှင့် myocardial infarction ကဘာလဲ?
Smärtan skapas av syrebristen i hjärtmuskeln där blodet inte längre kommer fram p.g.a. förträngningen. Man “luras” sedan att tro att smärtan kommer från andra delar t.ex. arm och hals, အာရုံကြောစနစ်အတွင်းတူညီ node များမျှဝေကနေနာကျင်မှုအာရုံခံကိရိယာများဖြစ်သောကြောင့်, နှလုံးရောဂါ.
ဒီနေရာတွင် Holmes ခဲ့ရှာဖွေနိုင်ပါတယ် (နှင့်) စာရိုက်ခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်နှလုံးအကူစက် “anundgård” ရှာဖွေရေးလယ်ပြင်၌ Hjärtstartarregistretsက်ဘ်ဆိုက်.
တစ်ဦးကစီမံကိန်းကို cardiac arrest နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကလူတွေ၏ utlarming များအတွက်စတော့ဟုမ်း၌တည်ရှိ၏. ယာဉ်မတော်တဆမှု၏အခြားအမျိုးအစားများကိုဖုံးလွှမ်းရန်အ Medelpad ယခုဖြစ်ကြောင်းစီမံကိန်းများနှင့်ထပ်မံဖွံ့ဖြိုးရန်တစ်ဦးကရှေ့ပြေး. ဒီမှာပို Read.
ဤသည်ကိုထုတ်သောအရာကို Holmes နှလုံးအကူစက်ဖြစ်ပါသည် – နှစ်ဦးစလုံးကျေးရွာသားများအားဖြင့်လှူဒါန်းခဲ့ခြင်းနှင့် “utomsocknes”, Olle Frisk ၏ပဏာမခြေလှမ်းမှာ. နှလုံးအကူစက်ရုံဖွင့်, သုံးစွဲဖို့ရိုးရှင်း, sedan talar en inspelad röst om precis vad man skall göra.
Lär dig hur hjärtstartaren fungerar (Olle Frisks အိမ်တော်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့)
Holmes အတွက်နှလုံး starter ဆွီဒင်ညွှန်ကြားချက်ပြောတတ်ခြင်းနှင့်လုပ်ဖို့အတိအကျဘယ်လိုပြောထားသည်.
Watch နဲ့ Holmes အတွက်ရရှိနိုင်နှလုံးအကူစက်များ၏မော်ဒယ်သုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ.
တစ်ဦးကnsiktet hänger. Förlamning i ansiktet?
K သည်roppsdel. Ena armen kan inte hållas i luften i tio sekunder.
T ကiden är dyrbar. Tveka aldrig, လက်စွပ် 112 direkt!